Sleeveless စပ်ချုပ်ပညာ Hippie Dress - Buddhatrends
Sleeveless စပ်ချုပ်ပညာ Hippie Dress
$36.00 $60.00 သငျသညျ (40% Save$24.00)
multicolor / S က multicolor / M က multicolor / L ကို multicolor / XL multicolor / XXL multicolor / XXXL multicolor / 4XL multicolor / 5XL
သင်၏ "hippie တစ်သင်းလုံးကကစားသမား" ဂိမ်းခြီးမွှောနှင့်ဤပုံမှန်မဟုတ်သောသေးလှပသောဝတ်စုံနှင့်အတူလူအစုအဝေးထဲကနေထွက်ရပ်တည်ရန်ရွေးချယ်ပါ။ စပ်ချုပ်ပညာထုတ်၏အမျိုးပေါင်းကခြောထူးခြားတဲ့နှင့်ဖန်တီးမှုပါစေ။ သင့်ရဲ့အမြင့်အနည်းငယ်စင်တီမီတာ add ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သာယာလှပတဲ့စိတ်ကိုဖမ်းစားနယ်စပ်ဒေသနှင့်အတူအဆုံးသတ်သောဖမျက်သို့မှီနေဖြင့်၎င်း၏အရှည်ရဲ့အချို့ patch ကိုပုံနှိပ်ခါးပန်းနှင့်အတူအလှဆင်။
ဒါဟာသင့်ရဲ့တိုင်းတာသည်နှင့်အညီ, ကျစ်လျစ်သေးသွယ်ထံမှပေါင်းအရွယ်အစားမှကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားအတွက်လာပါတယ်။ ဤသည်စားဆင်ယင်မှသာသင့်ရဲ့အလုံးစုံပေါင်းစပ်မြှင့်တင်ရန်လိမ့်မည်ဟုရောမသားရေဖိနပ်တရံနှင့်အတူပေါင်းစပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ကိုက်ညီခါးခါးပတ်နှင့်အတူကြွလာပေမယ့်သင်ကလည်းဖန်စီအိတ်နဲ့ရိုးရိုးလက်ကောက်များနှင့်လည်ဆွဲအတူက accessorize နိုင်ပါတယ်။
့စားဆင်ယင်လက်ခံရရှိခြင်းနှင့်ကိုယ်ကချစ်ကြ! အဆိုပါအထည်စားဆင်ယင်ရုံရုပ်ပုံများနဲ့တူရှည်လျားသည်နှင့်ပုံစံငွေတန်ဖိုးကိုတကယ်အေးမြ :) ကောင်းသောဖြစ်ပါသည်, ကောင်းလှ၏။
R ကို *** ဦး
L ကို *** ဈ
fast shipping picture exactly as real size perfect ,I am 88 kilo and 173 and I ordered 3xl and size very good
ကို C *** င
N ကို *** y က
S က *** တစ်ဦး
fast shipping, отслеживался track. fabric super! easy for summer, nice. size match.
S က *** s ကို
I love the product, thanks
заказпришелоченьбыстро, зачтоспасибопродавцу။ тканьхорошая-штапель, длиневеликоипрценедороговатодляэтоймоделиမူно
တစ်ဦးက *** s ကို
Looks good on me. The dress is long. I love rayon. Good to wear on hot summer season.
Nice! Good quality and totally worth of money!
အီး *** ဈ